Ngathi-iNanchang Fontainebleau yokupeyinta izixhobo zecandelo lezemizi mveliso, Ltd.
Ndiyathemba ukuba wonke umntu unokufumana ibrashi efanelekileyo kwiGolden Maple.
I-Nanchang Fontainebleau Painting Materials Industrial Co., ltd igxile kwimveliso kunye nokuthengiswa kweebrashi zomculi, kubandakanya i-watercolor / ioyile / i-acrylic / iibrashi zokuhombisa kunye neebrashi zobuhle. Banophawu lwayo- iGolden Maple, ibisaziwa njengelinye lawona magcisa alungileyo e-China. Banikezela ngazo zonke iintlobo zeenkonzo ze-OEM, nazo zinokukunceda ukuba wenze ibrashi yakho kunye nebrand. Nokuba unedatha yebrashi, emva koko banokuyivelisa, ngokwesicelo sakho sokwenza iibrashi ezininzi ezahlukeneyo. Babenoncedo kumthengi ekwenzeni uphawu oluninzi oludumileyo kwihlabathi liphela.
Le yintsapho yebrashi enendlela yakudala yokwenza iibrashi.Ngowama-2008, ibrashi yeGold Maple Artist yaba nguvulindlela kwindlela yabo kurhwebo lwangaphandle. Ngoku ibrashi yeGold Maple yomculi iye yamkelwa kakuhle e-China.
Yeyiphi eyona mveliso ibrashi enkulu eTshayina, kwaye ifumene indumiso engakumbi nangakumbi evela kubazobi abadumileyo bamanye amazwe. Malunga nefektri yabo, ibisebenza ngaphezulu kweminyaka engama-30, inamava atyebileyo ekwenzeni ibrashi yepeyinti yomculi. Zonke zenziwe ngezandla, emva kokuba ibrashi igqityiwe, iya kuba nolawulo lomgangatho oluntsonkothileyo. Ukuvelisa iibhulashi ezingcono, umzi-mveliso nawo uthenge oomatshini abaninzi abaphambili.
Baqokelela amagcisa adumileyo kunye nezobugcisa bezinto zobugcisa kunye, ngenjongo yokudala umgangatho ophezulu, owahlukileyo, iibrashi ezithandwayo zamagcisa acacisiweyo.Uhlala ekholelwa ukuba ngokugxila kumgangatho kunye nexabiso, iimveliso zakhe ziya kuba nokhuphiswano olomeleleyo ngokuchasene nezinye iimveliso. Bazinikezele kubugcisa begcisa elifanelekileyo kunye nokubabonelela ngeendlela ezintsha zokuphonononga ubuchule babo, ebavumela ukuba babelane ngomsebenzi wabo noluntu lwehlabathi. Bamkela imibono emitsha, bafuna itekhnoloji yakutshanje kunye nezixhobo- bachitha ixesha labo ekwenzeni izinto zobugcisa ezigqwesileyo zehlabathi, ezisetyenziswa ngamanye amagcisa ehlabathi.
Ifunyanwa kwiphondo laseJiangxi, kwisixeko saseWengang, elilelona lizwe lidala lase-China elineminyaka engaphezu kwe-1600 ubudala
-I-Nanchang Fontainebleau yokupeyinta izinto zeMveliso yezeMveliso, Ltd ..
Ifunyanwa kwiphondo laseJiangxi, kwisixeko saseWengang, elilelona lizwe lidala lase-China elineminyaka engaphezu kwe-1600 ubudala.
I-Wengang ihloniphekile njengedolophu yekhaya lase-China ukusukela ngo-2004.
Ngokuphathelele kwinkampani yethu, sinamava angaphezu kweminyaka engama-30 yokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zoyilo lwebrashi yepeyinti, besenze ibrashi yokuthengisa eshushu kubathengi bethu.
Ngaphandle kwesable, iinwele ezizodwa zezilwanyana, Zonke ezinye iibrashi ezinesampulu yasimahla.
I-Maple yeGold Maple amanani amancinci axhaswayo, indleko yelogo lixesha elinye lokuhlawuliswa.
OEM kunye nebrand yakho
Sibonelela ngenkonzo ye-OEM yokungenisa ngaphakathi / yevenkile / umthengisi. Ushicilelo lwe-OEM lophawu kumqheba kunye nokupakisha ziyafumaneka.
Umgangatho ophezulu wemveliso kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho unokwenza imithwalo efanayo kunye neesampulu zokuqinisekisa.
Zonke ii-imeyile ziya kuphendulwa kwisithuba seeyure ezingama-24 ngexesha lokusebenza.